Mahajanga: Hetsika maro loko no handravaka ny fankalazana ny 08 martsa
Hosantarina amin'ny diabe hamakivaky ny tanàna ny sabotsy 17 febroary ho avy izao ny fankalazana ny Andro manerantany ho an'ny vehivavy eto Mahajanga ambonivohitra. Fikambanana samihafa avy eny anivon'ireo fokontany no indray hihetsika amin'ity fankalazana ity araky ny rindran-damina napetraky ny komity mpikarakara, tarihin'i Mizza Anni, filohan'ny Kb 8ème.
Hitohy amin'ny fitaizana ara-batana amin'ny soradihy "Zumba", izay sady mety hoan'ny toe-pahasalaman'ny vehivavy rahateo hoy ny filoha ary hofaranana amin'ny fiaraha-miala hetaheta.
mercredi, 14 février 2018 19:45
Manandriana: Lasan’ny dahalo ny ombin’i Manandafy Rakotonirina
Nitrangana asan-dahalo tao amin’ny Fokontany Andriana Kaominina Ambohimahazo, Distrikan’i Manandriana, Faritra Amoron’i Mania ny alin’ny alatsinainy 12 febroary lasa teo. Very tamin’izany ny ombin’i Manandafy Rakotonirina, filoha nasionalin’ny antoko MFM sady mpanolontsain'ny filohan'ny Repoblika.
Miisa fito no lasan'ny dahalo ary tsy mbola misy tafaverina hatamin’izao.
Tsy nisy naratra na aina nafoy nandritra ity fanafihan-dahalo ity.
mercredi, 14 février 2018 19:29